Muzvare Khupe Vomiswa Kutsiva Nhengo dzeParamende Dzavakadzinga muDare
Chikumi 08, 2020
Muzvara ThokozanieKhupe naVaNelson Chamisa
Dare repamusoro nhasi ratura mutongo wekuti chikwata cheMDCT inotungamirwa naMuzvare Thokozani Khuphe chimbomira kutsiva nhengo ina dzeparamende chadzakadzinga mumatare eparamende zvichitevera chikumbiro chakasvitswa kudare naMuzvare Tabitha Khumalo naSenator Lilian Timveos veMDC Alliance.
Vachitura mutongo wavo panyaya iyi, mutongi wedare repamusoro, VaJoseph Mafusire, vati chikwata chaMuzvare Khupe chimbomira kutsiva nhengo dzeparamende idzi pakamirirwa kunzwikwa kwenyaya yakakwidzwa kudare neMDC Alliance yekuti chikwata ichi chainge chine kodzero here kana kuti kwete yekudzinga nhengo dzakapinda muparamende dzichishandisa zita rekuti MDC Alliance.
Zvaturwa nedare zvatsinhirwa negweta reMDC Alliance VaCharles Kwaramba.
Zvataurwa naVaKwaramba zvatsinhirwawo naMuzvinafundo Lovemore Madhuku avo vari kumirira Muzvare Khuphe.
VaMadhuku vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusorosoro reSupreme Court.
Zvichakadai, nyaya yekutorwa kwakaitwa muzinda webato iri weMorgan Tsvangirai House nechikwata chaMuzvare Khupe svondo rapera yakatarisirwa kunzwikwa mudare repamusoro munguva pfupi iri kutevera zvichitevera chikumbiro chakasvitswa nechikwata chaVaNelson Chamisa nevari kunzi varidzi vemuzinda uyu chekuti udzoserwe mumaoko echikwata chaVaChamisa.
Munyori mukuru muMDC Alliance, VaCharlton Hwende vati vari kumbotevedzera mutemo parizvino vachiti vatsigiri vavo vanokwanisa kutora muzinda uyu nechisimba kana vachida.
Hatina kukwanisa kutaura naMuzvare Khupe kuti tinzwe pavamire panyaya iyi asi munyori mukuru weMDCT, VaDouglas Mwonzora, vakati ndivo vane kodzero yekuve mumahofisi aya sezvo vachiti ndivo varidzi vebato sezvakaturwa nedare reSupreme Court.
Zvichitevera mutongo wedare iri, VaMwonzora vakanyora tsamba kuparamende yakakonzera kudzingwa kwaMuzvare Khumalo, Amai Timveos, VaProsper Mutseyami naVaHwende mumatare eparamende eHouse of Assembly neSenate vachinzi havasisiri nhengo dzeMDCT.